, ताराखोलामा ‘कोशेली घर’
ताराखोलामा ‘कोशेली घर’
बागलुङ, ९ भदौ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सघाउन ताराखोला गाउँपालिकाले ‘कोशेली घर’ बनाउने भएको छ । ‘कोशेली घर’का लागि चालु आवमा सङ्घ सरकारको रु. ३० लाख र गाउँपालिकाको रु. १५ लाख बजेट छ ।